XOG: Axmed Madoobe Iyo Cabdikariim Guuleed b oo Isku aragtiv noqday Iyo Gaas Iyo Shariifka oo uu waagu ku Baryay. “Warbixin” – Kismaayo24 News Agency
Maqaalo Somali News Top News XULASHADA TODOBAADKA
by admin 14th January 2016 14th January 2016 081
Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubada Hoose waxaa wali ka soconaya shirka madasha wadatashiga ee uu halkaasi ka furay Madaxweynaha Soomaaliya.
Shirka oo ah mid aa loogu kala aragti duwan yahay Ayaa hadane waxaa muuqaneysa siyaasiyiin awal Isku mowqif ahaa in ay kala furanayaan kuwo aanan Isku jaal horay u aheyne ay hadda Isku soo dhawaanayaan.
Madaxweynaha Jubaland oo horay culafo ula ahaa Madaxweynaha Puntland Ayaa aragtidiisa badalay,iyadoo uu qaatay mowqif kaduwan midkiiuu horay u qabay.
Axmed Madoobe Ayaa gabi ahaanba ka tanaasulay fikirkiisii ahaa in Degmo wax lagu soo xulo wuxuuna aaminay in Aysan suuragal aheyn Degmo wax Kusoo xulida,iyadoo walaac iyo kalinimo ay iminka soo wajahday Mudane Cabdiwali Gaas.
Dhiniciisa Madaxweynaha galmudug cabdiakriim Guuleed Ayaa ka xarig furtey Shariif Xasan Sheekh aadan oo ay horay Isku aragti ka ahaayeen barnaamijka hiigsiga 2016 ka waxaaa hada Isku jaal ah Guuleed Iyo Madoobe.
Shariifka Iyo Gaas oo aan Isku aragti ka ahaayeen. Ayaa hada u muuqda kuwo Aysan is hureyn xulafo noqoshadooda Tiiyoo ay dheertahay ineysan Isku Jiho wax u wadin.
Siyaasadda Soomaaliya oo isgadiskeedu badan yahay Ayaa hadda waxaa muuqata in majaraha ay iminka hayaan guuleedka galmudug Iyo madoobaha Jubaland.
Dawladda Kenya oo Ka Walaacsan Yareynta Ciidamada AMISOM ee Soomaaliya
Ahmed sudani 9th March 2018 9th March 2018
Sawirro:- Beesha Sade oo ku baaqday Kenya in ay joojiso Duqeymaha ay ka wado Gedo ee shacabka lagu bartilmaameed sanayo
admin 8th April 2015 27th August 2015
TOP NEWS: Dowlada mareykanka oo war lama filaan ah ka soo saartay taageerada ay siiso soomaliya gaar ahaan la dagaalanka alshabaab
Tifaftiraha K24 28th February 2017